ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖူးမြော် ကြည်ညိုနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှူရှင်နှစ်ဦ? - Yangon Media Group
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖူးမြော် ကြည်ညိုနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှူရှင်နှစ်ဦ?
မဲဆောက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇
ကရင် ပြည်နယ် မြဝတီမြို့မှ အလှူရှင်တစ် ဦးနှင့်ရန်ကုန်မြို့မှ အလှူရှင်တစ်ဦးတို့ ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှ ဆရာ တော်တစ်ပါးထံသို့ မဟာမြတ်မုနိ ပုံတူရုပ်ပွားတော်ကြီးတစ်ဆူကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံလမ်းပမ်းမြို့ သို့ မဲဆောက်မြို့မှတစ်ဆင့် လမ်းပမ်းမြို့သို့ ပင့်ဆောင်လှူဒါန်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါမဟာမြတ်မုနိပုံတူ ရုပ်ပွားတော်ကြီးသည် ကြေးအ လေးချိန်နှစ်တန်ကျော်ရှိပြီး ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ခန့်တန်ဖိုးရှိကာရုပ်ပွား တော်ကြီးကို မန္တလေးမြို့ရှမ်းစုရပ် ဗိုလ်ဗထူးလမ်းမှ ကြေးသွန်းဆရာ ဦးကွန်း၏အလုပ်ရုံ၌သွန်းလုပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဒီရုပ်ပွားတော်ကို ရန်ကုန် မြို့ Neo Vision Hospital မှ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက် တာသန်းဝင်းနဲ့မြဝတီမြို့အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးပူးပေါင်းပြီး ထိုင်းနိုင်ငံလမ်းပမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ ”ဝမ်ကျောင်းခ”ကျောင်းထိုင်ဆရာ တော်ကိုလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မဟာ မြတ်မုနိရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုဖူး မြော်ကြည်ညိုချင်ကြတာကြောင့် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးရဲ့ ရင်ငွေ့ တော်ကိုခိုလှုံပြီးပုံတူရုပ်ပွားတော်ကြီးအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံလမ်းပမ်းမြို့ ကိုပင့်ဆောင်ပြီး”ဝမ်ကျောင်းခ” ကျောင်းတိုက်ကိုလှူဒါန်းပေးရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု အလှူရှင်မြဝတီမြို့အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်းနေဦးကျော်ဟိန်းကပြောကြားသည်။
အဆိုပါရုပ်ပွားတော်ကြီးအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ မှတစ်ဆင့် လမ်းပမ်းမြို့သို့ပင့်ဆောင်ရာ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော် စင်များကလမ်းတစ်လျှောက်စည်ကားစွာဖူးမြော်ကြိုဆိုကြကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး အတွင်း ပါဝင်သော လယ်ယာမြေများ အတွက် နစ်နာကြေး လျော်ကြေးငွေပေး?
ဒီချုပ်စီအီး စီအဖွဲ့တွင် ဦးဝင်းထိန် ရှိ နေဆဲ ဟုဆို
မန္တလေးမြို့ပေါ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ဖြည့်တင်းနိုင်ရေး အထူးစီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ငါးပိသိပ် ငါးချဉ်သိပ် သင်ကြားနေရသည် ဟ
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား ပြည်တွင်းပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ အတ?